रोमी र सविना को मामला मा स्थानीय पुलिस अधिकारी को खिलाफ घोषणा: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
मिडिया संयोजनमा प्रहरी आफ्नो सर्वश्रेष्ठ Romy र साभान्नाह स्पष्ट Romy र साभान्नाह कुरा र विशेष गरी कुराहरू हल रूपमा राम्रो हो कि छाप मा उत्तर साँच्चै दिन हुनत, यो मामला बिल्कुल छैन। त्यसबेलाको र मिडिया अनुसार हत्या गरेका थियो Romy Nieuwburg केटा छवि psychopathic केटा धारण छ जसमा एक कहानी आउँछ। यो एक कथा हो एनएलपी शैलीमा लिखित, जहाँ कुनै प्रमाण प्रदान गरिएको छैन। Savannah Dekker मा अभियोग अभियोगक सुरक्षा क्यामेराको तस्वीर मा हुनेछ, तर यदि तपाईं पूरा गर्दछ मिश्रित चित्रहरु मिडियामा देखाउनुहोस् र तपाइँले एक एनएलपी कथाको साथ पनि छोड्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईलाई थाहा छ कि अधिकांश दर्शकहरूले यो विश्वास गर्छन्। बिना (अविश्वसनीय) छविहरू, कथा पूर्ण रूपमा अविश्वसनीय देखिन्छ। प्रत्येक मामला मा, दुवै कहानियों को एक-दूसरे को स्वतंत्र रूप देखि मीडिया मा ल्याइन्छ, किनकि केहि चीजहरु एक-दूसरे संग केहि गर्न को लागी बनाए राखन को लागि। दिउँसो 1 बजे मृत पाइन्छ र अन्य अझै पनि समय मा हराइरहेको छ, एक अम्बर चेतावनी र हेलिकप्टर र नशहरुको प्रेमी कुकुर एक विशाल खोज को लागि पर्याप्त छ कि कारण छ: किनभने 17 वरिपरि 00 केटी भने यो अर्थहीन छ। तर्क जहाँ प्रहरीले थाहा पाउने छैन जहाँ पूर्णतया हल्का हुन्छ, किनकि त्यहाँ सँधै एक टेलिफोनको तीरको सीधा उपलब्ध विकल्प हो। मिडियामा कथा रेखाबाट अब यो स्पष्ट छ कि त्यो उसको साथ भएको थियो।
किनकि धेरै वर्षसम्म त्यहाँ फर मा स्वतंत्र छ जुन मीडिया बाट स्वतन्त्र छ र वैकल्पिक मिडियाको स्वतन्त्र छ, केवल अनुसन्धान र यो व्यक्तिले, मार्टिन व्रिजल्याण्ड नामको नाममा लेखिएको छ, तर रोकिँदैन (जानबूझेर बिखराएको लिबेलको बावजुद र राज्य स्मिथ जेरोन हग्वेजीज र धेरै साइटहरू हटाइएका छन्), यो अनौठो कथाहरु फैलाउन गाह्रो छ। मार्टिन व्रिजल्याण्डका लेखहरू यस प्रकारको घटनामा 1 दिनमा 100,000 पटक छिट्टै पढ्न सकिन्छ। अनि केहि दिन पछि नीदरल्याण्डको लगभग आधा फैलिएको छ। यो सम्भवतः कारण हो कि एकहोली प्रहरीले होभलेकबाट पनि यो लेखकलाई आक्रमण गर्न थालेको थियो। उनले यसो भनिन् कि म यस विषयको बारेमा लेखेर लडाकु र विद्रोह गर्थे। तल हेर्नुहोस्।
सबैले मलाई केहि समयको लागि पछ्याइरहेकी छु कि म 2013 मा हूँ Anass Aouragh हत्या लेखे र जानाजानी structurally व्यस्त थिए साइटहरु एक्स नम्बर थिए कि किनभने म पहिले नै सूचना जारी थियो, pseudonym लेखक मार्टिन Vrijland छनौट जो कोहीले मुख्यधारा मिडियामा आधिकारिक व्याख्यानको आलोचना गर्न चाहन्थे, एक कप सानो बनाउनुहोस्। यी साइटहरूले तपाइँलाई पूर्णतया जलाउदछन् र मेरो मामलामा उनीहरूले मेरो वास्तविक नाम पत्ता लगाउन पनि कल गरे। तिनीहरूले पनि मेरो बारेमा नकारात्मक जानकारी गुमाउन खुला कलहरू गरे। साईटहरूले सम्पूर्ण इन्टरनेसनल लाइब्रेरीको भित्ता भरिएको र मेरो ठेगानामा गल्ती गरे र मैले 2013 मा एक घोषणा गरे। यद्यपि मैले घोषणाको दौरान भ्रामक र अपमानजनक प्रमाणको साथ व्यापक फाइल पेश गरेको छु र तथ्याङ्कको घोषणाले धेरै घण्टा लिएको छु, मैले फेरि घोषणाको बारेमा सुनेको छु। मैले कुनै पनि लेख वा प्रतिक्रियाको कुनै अन्य प्रकार पनि प्राप्त गर्नुभएन। टेलिफोनमा पुलिस स्टेशनमा फोन गरेको छ जुन मैले एउटा दायर गरेकी थिईन टिप्पणीको साथ खारेज गरिएको थियो "यो अझै पनि मूल्याङ्कन अन्तर्गत छ"। मसँग छ देखाउन सक्छ कि यो सबै लडाकु र विद्रोही राज्य कर्मचारी जेरोन हुगोवितिजबाट आए र उनीहरूको राष्ट्रिय पासपोर्ट प्रकाशित गरे। यसले मद्दत गर्दैन। घोषणाको साथ केही भएको छैन र आज सम्पूर्ण इन्टरनेट अझै पनि नकारात्मक अपमानजनक कथाहरु बाट भरी छ। कि पक्कै यसको प्रभाव छ। मेरो निजी जीवनको लागि मात्र हानिकारक होइन, तर यो पनि यो अर्थ हो कि म फेरि नियमित काम पाउन सक्दिन। गुगल खोजले तुरुन्त एक नयाँ नियोक्ता रोक्न सक्छ। यसको अतिरिक्त, मेरो साइट को नयाँ अनुयायी अझै पनि यी ग्रंथहरु संग बमबारी गरी रहेको छ। यसका लागि एक फेसबुक पेज सेट अप गरिएको छ।
यही कारणले गर्दा यो फेसबुक पोस्ट एजेन्सी एरिक क्लाइनर र रोमी र सविनाहको मुद्दामा थप लोड गरिएको छ। एजेंटले पहिले नै अज्ञात लिबिललाई दिईरहेको छ र अन्य अनौपचारिक अनौपचारिक अनलाईन प्रदान गर्दछ। यद्यपि अघिल्लो घोषणाको साथ केहि पनि छैन र सम्भवतः कहिल्यै हुनेछैन, म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको लागि लड्न जारी राख्छु। यद्यपि यो अझै नीदरल्याण्डमा आधिकारिक रूपमा अवस्थित छ, यो स्पष्ट छ कि राज्य सबै प्रकारका परिष्कृत विधिहरू लागू हुन्छ जसले सबैलाई अझै पनि आलोचना एक सानो सानो व्यक्त गर्न हिम्मत गर्न सक्छ। तपाईले केवल व्यक्तिलाई गम्भीर क्षतिको कारण बनाउनुहुन्छ, ताकि कसैको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गर्ने हिम्मत पाउनेछैन। एजेन्सी कोइरालाको टिप्पणी पनि हानिकारक छ, खासगरी किनभने उनी भन्छिन् कि म स्वतन्त्र र अपमानजनक छु। यसैले मैले रोमी र सावनाह मामला को गंभीरता देखि ध्यान केंद्रित गर्न को लागी अरु केहि नहीं गर्छन र यस मा कुनै को निशाना या हराए नहीं।
मेरो पहिलो टेलिभिजन कुराकानीमा पुलिससँग यो रिपोर्ट गरियो कि मैले एक एजेन्सी विरुद्ध रिपोर्ट फाइल गर्न सकेन। त्यसपछि मैले सेवा गरे एउटा उजुरी। यो पछिल्लो हप्तासम्म भएको थिएन जुन टेलीफोन सम्पर्क मेरो साथमा गरिएको थियो। त्यस कुराकानीको बारेमा यो रिपोर्ट गरिएको थियो कि म पनि एक रिपोर्ट फाइल गर्न सक्छु। म यो हप्ता यस घोषणा को रिपोर्ट गर्न को लागी थियो, तर म निम्न पाठ संग भएको थियो:
त्यसोभए यो कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै एउटा प्रयास गरियो। म राज्य बोलीको स्वतन्त्रता दबाउनु यसको नागरिकहरु विरुद्ध मानहानि र निन्दा प्रतिबद्ध हुँदैन भनेर विश्वास किनभने, तथापि गम्भीर यसलाई लिनुहोस्, र म पनि दुवै यो र गम्भीर पुरानो घोषणा जारी हुनेछ। त्यसकारण मैले निम्न रूपमा जवाफ दिएँ:
शुभ दोपहर सर ..,
मेरो व्यक्ति विरुद्ध विफलता र विद्रोही 13 जुन 2017 मा निजिर्ल्क नगरपालिकामा सामुदायिक एजेन्ट एरिक कुउन्नखको फेसबुक पेजमा अनलाइन रहेको थियो।
तपाईले यस लिङ्कको अन्तर्गतको यो प्रतिलिपि पाउनुहुनेछ:
यद्यपि एजेन्टले मेरो पूर्ण लेखकको उपनाम 'मार्टिन व्रिजल्याण्ड' प्रयोग गर्दैन, तर केवल मार्टिनको नाउँ, यो स्पष्ट छ कि उहाँ मेरो बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो स्पष्ट छ, अन्य चीजहरू मध्ये, सबै प्रतिक्रियाहरूको प्रतिक्रियाबाट यो जवाफ दिए। समयमा टाइमलाइनमा प्रतिक्रियाहरूको रेकर्डिङ यो भिडियोमा फेला पार्न सकिन्छ।
उहाँले म मानहानि र निन्दा भरिएका छन् कि लेख प्रकाशित उल्लेख किनभने, commits कि श्री Kluinhaar मानहानि र निन्दा मेरो हेर्नुहोस्, पर्याप्त प्रमाण मा। " यसैले उहाँले शाब्दिक कुरा जो कुनै कानुनी जूरीको फैसला म मानहानि र निन्दा प्रतिबद्ध छ कि सुझाव छ मलाई दोष लगाउँदै। यसको मतलब छ कि मेरो लेख र मेरो काम यति नै गर्भ हुन्छ र सार्वजनिक रूपमा फेसबुकमा निन्दा गरिन्छ। कुनै पनि निर्णय बिना वा मेरो ठेगानालाई स्पष्ट चेतावनी, म सार्वजनिक रूपमा मानहानि र निन्दा गरेको आरोपमा हुनेछु। यदि, उदाहरणका लागि, मलाई libel र निन्दाको दोषी थियो, उनले सही रूपमा एक रिपोर्ट गरे। अहिले यो तथापि, मामला थिएन, न त म कुनै पनि चेतावनी वा सङ्केत यो मेरो नाम र प्रतिष्ठा असर प्रहरी र न्यायपालिका, मलाई स्पष्ट छ कि यो (जस्तै सामाजिक मिडिया प्रकाशन) अनुचित कुन दिशा र मा प्राप्त।
पहिले 2013 मा मैले रिपोर्ट गरेको दाबी को लागी पुलिस को अनलाइन लेल र मेरो ठेगाना मा सबै प्रकार को वेबसाइटहरु को विरुद्ध गर्भपात गरेर यो गरे र अझै अनलाइन छ। मैले यो (धेरै विस्तृत र विस्तृत) घोषणा को केहि पनि नहीं सुना छ। कुनै पत्र पनि होइन जुन घोषणा प्रक्रियामा छैन। म कल्पना गर्न सक्छु यो यो भयो, किनकि मलाई धेरै सम्भव भएन कि यो लडाकु र विद्रोह एक व्यक्ति जसले राष्ट्रिय सरकारको लागि काम गरिसकेको थियो। तर यसले तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन कि यो पुरा तरिकाले गलत छ। यो घोषणा निश्चित रूपमा उठाईएको छ र निलम्बन गर्नुपर्छ। यसैले यो देखिन्छ कि मेरो नाम सार्वजनिक रूपमा मुस्कुराउन सकिन्छ, बिना विपरित। सायद यो कारणले गर्दा म महत्त्वपूर्ण लेख लेख्छु जुन क्यालिफोर्नियाको 'अहिनीय' हो। यो तथ्यबाट हटाउन सकिँदैन कि यस्तो विनाश र विनाश गरेर मेरो सम्पूर्ण निजी जीवनलाई प्रभावित हुन्छ र म समाजमा सामान्य काम कहिल्यै पाउँदैन। त्यो स्वतन्त्रता र निन्दाको प्रभाव हो। यस तथ्यले श्री क्लगनरलाई यस्तो टिप्पणी दिइरहेको छ अहिले मेरो पहिलेदेखि नै दायाँ अनलाइन प्रतिष्ठाको लागि थप वृद्धि हो।
यद्यपि पोस्ट क्लगइन द्वारा पोस्ट गरिएको टिप्पणी वा टिप्पणी गरिएको परिमार्जन वा हटाईएको छ भने, यो यो भन्न सकिन्छ कि यो मेरो प्रतिष्ठालाई क्षति पार्न पर्याप्त लामो अनलाइन भएको छ। मलाई लाग्छ त्यसैले यो घोषणा रेकर्ड गरिएको छ र गम्भीर व्यवहार पनि गरिन्छ।
दयालु सम्बन्धको साथ
माथिको पाठ प्रशोधन पछि प्रक्रियामा राखिएको थियो जुन मैले साइन-इन गरेमा सम्पर्क व्यक्तिलाई फिर्ता पठाएको छु। म पनि श्री कोलगइन को टाइमलाइन को एक भिडियो पठाएको छ जसमा सबै प्रतिक्रियाहरु सहित पोस्ट को रिकर्डिंग। म निश्चित रूपमा यो पोष्ट वा तल प्रतिक्रियाहरू हटाउन तयार छु। यी प्रतिक्रियाहरु पनि पेशेवर "trolls" को काम जस्तो देखिन्छ।
यसैले यो देखिन्छ कि राज्यले आधिकारिक पढाइको आलोचनालाई रोक्न विधिहरू प्रयोग गरिरहेको छ, जो निर्दोष र हानिकारक हुन्छन्। प्रतिबद्ध मानहानि र हानिकारक अनलाइन अनलाईन पराजित छ र मान्छेले यी असमर्थित कथाहरु लाई व्यावहारिक रुपमा हरेक फेसबुक पोस्टमा प्रयोग गर्दछ। यो म सधैं यो मेरो समय मा टिप्पणी देखि, त्यसैले भाग्यवस सबैले यी झूट सामना छ, साथै आफूलाई तिनीहरूले यी पदहरू संग bombarded मेरो कुरा साझेदारी गर्दै मान्छे हटाउन पर्छ। यस व्यक्ति कर्मचारी जेरोन हग्वेविजिज (र उहाँका कर्मचारीहरु) बाट मेरो व्यक्तिको विद्रोही र हानिकारकसँग धेरै व्यापक दायरा र धेरै नकारात्मक असर पर्दछ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि मैले यो पटक फेरि रिपोर्ट गरेको छु। यो एजेन्ट एक एजेन्सी विरुद्ध। म सत्य र लडाइँको लागि लड्न जारी राख्छु Machiavelli तरिकाहरु मिडिया प्रयोग गर्न लाग्दछ।
किनभने म लड्न धेरै वर्ष पहिले निर्णय र किनभने यी सबै मानहानि र निन्दा मलाई बर्बाद छ दुवै निजी र आर्थिक पूर्ण, म तिमी मलाई समर्थन गर्न आग्रह। यो €2प्रति महिना बाट वा एक-पटकको दान गरेर यो साइटमा सामेल हुन सक्दछ। तपाईं सबै लेख रोमी र सावनाह मामलामा भण्डारण गर्न सक्नुहुनेछ यो लिंक अन्तर्गत एक राम्रो सामग्री पुन: पढ्न, ताकि तपाईं यो मामला देख्न किन किन बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं यो गर्छन, किनकि यो समय हो कि मान्छे अब आफैले आफैले कथाहरु संग छोड्न र त्यसमा राज्यमा समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान नयाँ कानुनको सबै प्रकारले धक्का दिएका छन्, जसले अधिक र अधिक स्वतन्त्रता लिइरहेछ। यो मामला पनि यस अधिकतमिमलाई भेट्न लाग्दछ। त्यसैले यस अवस्थामा हालैका लेखहरू पढ्नुहोस्। खासगरी किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ कि मिडियाले अनियमित रुपमा केहि पनि ल्याउन सक्दैन, यो महत्त्वपूर्ण छ कि मान्छेबाट आलोचना अवस्थित छ। मेरो ठेगानामा सबै लाइब्रेरी र निन्दाको बावजुद, म जारी राख्न चाहन्छु। किनकि एक खुला आवाज एक खुला समाज मा आवश्यक छ; किनकि भाषणको स्वतन्त्रता लडाइन्छ अनि तपाईसँग यो अधिकार पनि छ; यसकारण म तपाईंको सहयोगको लागि अपील गर्दछु। त्यो बनें यहाँ €2बाट सदस्य प्रति महिना वा एक गर्नुहोस् एक पटक दान.
ट्याग: घोषणा, विशेष, जेरोन हगोगोइजे, न्याय, Kluinhaar, अन्तिम, खतरनाक, मार्टिन भिजल्याण्ड, हत्या, समाचार, अनुसन्धान, सरकार, राजनीति, Romy Nieuwburg, Savannah Dekker, शर्मिला, राज्य, टाइमलाइन, मारियो, पड़ोस एजेन्सी, मामला
15 जुलाई 2017 मा 11: 30
यो तपाईंको प्रशंसा हो, तपाईंको काम, कि केहि प्राधिकरणले तपाईंको लागि ध्यान राखेको छ। यसको मतलब तपाईंले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुहुन्छ। अन्यथा तिनीहरूले पूर्णतया तपाईंलाई बेवास्ता गर्थे।
15 जुलाई 2017 मा 13: 05
धन्यवाद। हामी पर्खिरहेका छौं र हेर्नुहोस् कि तिनीहरूले यो कसरी व्यवहार गर्नेछ ...
15 जुलाई 2017 मा 18: 08
नीदरल्याण्डमा मेरो समयबाट मैले एउटा कुरा सिके: "धेरै मानिसहरू चुप लागेका छन्, केही मानिसहरू एक कार्य गर्दैछन्।"
20 जुलाई 2017 मा 14: 30
"एक समय वा छल मा गिनती सत्य एक क्रांतिकारी कार्य हो" (जर्ज Orwell द्वारा उद्धरण)
20 जुलाई 2017 मा 15: 49
यो ओभरवेलको 1984 को बारेमा डेभिड होफमनको एक उद्धरण हो .. ???? यो सँधै गलत व्यक्तिको लागि जिम्मेदार छ।
15 जुलाई 2017 मा 19: 57
यो राम्रो तरिकाले भनिएको छ कि यो अपमानजनक छ, कि सैनिक नागरिकहरु यस्तो जिल्ला एजेन्ट द्वारा मूर्ख भइरहेको छ।
तर हामी बिर्सन हुँदैन भनेर DWDD, Jinekshow, मयुर र कन्सर्ट (सम्पादक गरेको) बिल्कुल सजग र खेल खेल्न र यसैले मान्छे र पत्रकारिता को स्वतन्त्रता को strangulation मा complicit जस्तै मिडिया मान्छे विश्वासघात रिग।
17 जुलाई 2017 मा 11: 12
@ मार्टिन र @ एलेन यो पहिले नै स्पष्ट छ कि यी 'सज्जनहरूले पनि राजनीतिधर्म मानहरू पालन गर्न सक्दैनन् र केवल उनीहरूको EPISTELT सुरु गर्न सक्छन्:
"नमस्कार सर" त्यो सज्जन अझै पनि केहि छ, तर तपाईं नमस्कार संग सुरु हुनुहुन्न, हो नमस्ते बस यो हेर्नुहोस् :) :) ???? आदि
कस्तो प्रकारको शिष्टाचारले कहिल्यै सिकेको छैन?
TV मा माथि नैतिक स्तर, क्षरण र DREDGING पल्प गडबड, तर एक इन्टरनेटमा देख्छन् रूपमा, Faecesbook, Twittwittwittwiter आदि: कुनै अब तपाईं देख्न थप र थप
कुनै सही नमस्कार, एक पत्र को ठेगाना शीर्षक पनि मेल (किनभने मेल = पत्र !!!) छ:
"प्रिय सर" वा "प्रिय महोदया"
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 10: 46
त्यो कसरी हो
« के भने यदि नैनो र कृत्रिम बुद्धि अनैतिकतामा परिणत हुन्छ?
रोमी र सावनाह मामलामा द्रुत कार्य: प्रहरीले सुत्न छोडेका छन् जहाँ "सावनाह फेला पर्यो" »
कुल भ्रमण: 4.177.134